तिनाउ विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २७ फागुन २०७५)
२०६३ कात्तिक १५ गतेदेखि करोबार शुरू गरेको तिनाउ विकास बैंकले चालू आव २०७५/७६ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ४ करोड ७ लाख नाफा कमाएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड ९९ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ८२ लाख २४ हजार खराब कर्जा उठाएकाले र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५० करोड ६९ लाख छ । २०७४/७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको छ । १२ प्रतिशत प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५६ करोड ७७ लाख पुगेको कम्पनीले वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाएको छ । पुस मसान्तमा पनि कम्पनीले रूपन्देहीको मंगलापुर र कान्छीबजारमा दुईओटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीपकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आगामी दिनमा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंकसँगै राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बनाउने योजना छ ।
2019-03-11 - 67 view(s) - abhiyan